Shir ballaaran oo ka socdo magaalada mugdhiso . – iftiin fm
Shir ballaaran oo ka socdo magaalada mugdhiso .
January 13, 2021 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Magaalada mugdhiso ee gudaha ee dalka Soomaliya ayaa waxaa ka socdo shirka sannadlaha ee Garsoorka dalka oo ay ka qeyb galayaan hay’adaha cadaaladda heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa goordhow ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Guddoomiyaha guddiga qaban qaabada shirka, Sheekh Saalax Ibraahim Dhiblwaale oo ah garsoore ka tirsan Maxkamadda Sare ayaa warbaahinta uu sheegay in shirkaan diirada lagu saari doono qodobo ay ka mid yihiin xal u helida Musuq maasuqa, Fulinta xukunada, Been abuurka iyo qodobo kale oo muhiim u ah arimaha Garsoorka.
Shirkaan ayaa waxaa goobjoog ka ah Hay’adaha Garsoorka Masuuliyiinta qeybta ka ah oo ay kamid yihiin Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda, Guddoomiyaha maxkamadda sare,Guddiga Cadaaaladda iyo Garsoorka ee Baarlamaanka, Maxkamadaha gobolka Banaadir, Xafriiska Garyaqaanka, iyo Xafiiska Hanti dhowrka guud ee Qaranka.
← Kooxda Juventus oo ka hadashay Weston McKennie
Xisbiga Jubilllee oo go’aan kaso saaray doorashooyinka Kuceliska ee dhawaan la qaban doono →